:Tali: Nkoulou ji ihe mgbaru ọsọ mbụ nke mgbake na Series A - TELES RELAY
:Tali: Nkoulou gbara ihe mgbaru ọsọ mbụ na mgbake Serie A
By TELES RELAY	 On June 21, 2020
Bọọlụ Italy - Juventus na -enye onwe ya nugget ...
Ndozigharị VAR na -ewepụ mkpịsị aka dị nro ma na -agba ihe mgbaru ọsọ 20 ...
Ndị eze Malabo: Ndị egwuregwu 3 a na -enyo enyo na ha bụ ... ụmụ nwoke
Oge a na-amaliteghachi n'ụzọ dị mma maka onye na-agbachitere Cameroonian. Maka egwuregwu izizi nke nlọghachi na Italian Serie A, otu egwuregwu nke agbanyeghị ijikọ ọnụ ndị egwuregwu, ọ bụ Nicolas Nkoulou ga-akara akara nke mbụ na nzukọ a na-agụta 25.e ubochi mmeri. Anyị na-akpọ iri na isee Nkeji na enwetara olileanya niile ọkachasị na onye Kamerịa tinye ikpere n'ala wee rara ihe mgbaru ọsọ ya na George Floyd, onye America nwụrụ n'okpuru arụrụala ndị uwe ojii na Minneapolis.
N’ịjụ maka egwuregwu ahụ, Nicolas Nkoulou kọwara: “Anyị bidoro asọmpi ahụ nke ọma, anyị jisiri ike nye goolu, mgbe ahụ anyị nyere goolu nke ịgba ahụ. Ọ bụ egwuregwu anyị gaara emeri. Mana nke a ka bụ isi ihe dị mkpa. Anyị na-arụ ọrụ nke ọma, mana anyị ga-azụkwu karịa n'ihi na anyị chọrọ inweta akara atọ na-esote na egwuregwu na-esote, megide Udinese.
Mgbe a jụrụ ya ihe jubilation a ? ọ zara: " Mgbe m mere akara, echere m ozugbo banyere nwanne m nwoke Floyd, nke dị m mkpa ".
Isiokwu a pụtara na mbụ https://www.camfoot.com/les-lions-en-club/italie-nkoulou-inscrit-le-premier-but-de-la-reprise-en-serie-a,30788.html
TELES RELAY 56313 posts 1 comments
Mpempe akwụkwọ maka osi ite na ọtụtụ osi ite na-esi nri maka ụlọ nri
Chọọ maka Ndị Inye Akaụntụ
Bọọlụ Italy - Juventus na -enye mkpụrụ osisi Brazil na ọnụ ahịa ...
Ndozigharị VAR na -ewepụ mkpịsị dị nro, na -agba ihe mgbaru ọsọ 20 offside
LEAGUE PRIMIMINARY CHAMPIONS LEAGUE: Louves na -eme kaadị anụ ọhịa n'ụlọ.
Xnxx: Nke a bụ ọnọdụ mmekọahụ kachasị amasị nke French
Xnxx: ndụmọdụ 4 iji mee ka ezumike ezumike gị dịgide
Isi iri anọ ahụ maka nnukwu mmekọahụ! - Vidiyo
FNFally Ipupa Snep ka kwuputara Diski Gold ..…
Nke a bụ ihe mere na Simone Biles 'mma ...
Umu Obiligbo - Egwu Ndi Nne (Official Video)
"Messi so m gwuo egwu, ọ bụghị m na -egwu Messi" ...
IMF Executive Board kwadoro 375 ...
ụlọ ọrụ bauxite na ndị nrụpụta ụgbọ ala na-enwe nrụgide -…
Akwụkwọ akụkọ Abdou # 22: Mmekọahụ, Ọchịchị na Alakụba - Vidiyo
Ndụmọdụ 5 maka ihicha nkwonkwo tile ma mee making
Ebe a na -ewu ọdụ ụgbọ mmiri Ndayane na ngọngọ mmalite - Young…
Mba, Francis Ngannou adabaghị ọrụ bụ isi nke Black ...
Pantam na-esi ísì ụtọ maka inwe mmekọahụ dị adị exist Ma na…
Ouattara-Gbagbo, Shakespeare na lagoon - Jeune Afrique
Na Mbụ	Osote 1 nke 30